Umaki: i-hyperlocal | Martech Zone
Ukumaketha Okuseduze Nokukhangisa: Ubuchwepheshe Namasu
ULwesihlanu, February 5, 2021 NgoMgqibelo, ngoMashi 6, 2021 Douglas Karr
Lapho nje ngingena ku-Kroger (esitolo sami) wangakini, ngibheka phansi ifoni yami futhi uhlelo lokusebenza lungazisa lapho ngingathola khona ibhakhodi lami le-Kroger Savings ukuze ngibheke noma ngikwazi ukuvula uhlelo lokusebenza ukusesha ngithole izinto ku indlela. Lapho ngivakashela isitolo saseVerizon, uhlelo lwami lokusebenza lingixwayisa ngesixhumanisi sokungena ngaphambi kokuthi ngiphume emotweni. Lezi ezimbili
Izindlela ezi-5 Zokuhlomula Zokuthengisa ezivela ku-Hyperlocal Social Monitoring
NgoLwesihlanu, Septhemba 19, 2014 NgoLwesihlanu, Septhemba 19, 2014 UNathan Chandra
Amafemu okuthengisa ancintisana nemidondoshiya yezitolo eku-inthanethi efana ne-Amazon neZappos. Izitolo zezitini nodaka zihlose ukuhlinzeka ngomuzwa omuhle kumakhasimende abo. Ukuhamba ngezinyawo kuyindlela yokugqugquzela nentshisekelo yamakhasimende (kungani umuntu akhethe ukuza esitolo azothenga lapho inketho yokuthenga online itholakala). Inzuzo yokuncintisana noma yimuphi umthengisi anayo ngaphezu kwesitolo esiku-inthanethi ukuthi umthengi useduze futhi ukulungele ukwenza
Kungani iWalmart Kufanele Ibheyili kwiHyperlocal Social
NgoLwesine, Septhemba 20, 2012 NgoLwesine, Septhemba 20, 2012 Douglas Karr
I-Rommend.ly isiqedile ukuhlaziya isu elihlulekile yiWalmart lokuthuthukisa amakhasi asendaweni e-Facebook endaweni ngayinye yezindawo ezingama-3500. Nasi isiphetho esenziwe nguRommend.ly: I-Walmart ibonakala inesu lokuqukethwe kufaka phakathi inqubomgomo yokuthumela esebenza. Kodwa-ke, akubonakali ukuthi banezinhloso ezisezingeni lesitolo lokuthola noma ukuheha abalandeli. Okungenani, akekho obonakala esebenza okwamanje. Ukuphawula okukodwa ukusetshenziswa kwecebo lokuqukethwe eligxile kakhulu. Lokhu
Thursday, September 20, 2012 Thursday, September 20, 2012
Ngaso sonke isikhathi lapho ngivivinya ezinye izikhangiso kusayithi lami, bekufanele njalo ngingene kumklami wetimu futhi ngihlele ikhodi yazo eyinhloko ... okuthile okungitatazelisa kancane. Ngivivinye ama-plugins wesikhangiso ebhulogi lami leWordPress, kepha akukho neyodwa kuwo ebinamandla anele. Kuleli sonto ngithole ekugcineni engikudingayo nge-plugin emnandi yokuphathwa kwesikhangiso seWordPress, ebizwa nge-Ad-minister. I-interface ye-Ad-minister ayinembile kakhulu, kepha